Ny cryptocurrency Chia, mampiakatra ny vidin'ny kapila mafy | Avy amin'ny Linux
Iray amin'ireo olana lehibe amin'ny Bitcoin dia izany ny fifanakalozana tsirairay dia mitaky angovo lehibe hamarinina. Mba hialana amin'ny fako toy izany, crypto hafa dia hafa no mamela ny fitsipiky ny porofon'ny asa, izay lafo amin'ny angovo, ho an'ny vahaolana hafa toy ny porofon'ny tsatoka na ny porofon'ny fananana, izay tsy mila fahefana informatika manokana.
Bram Cohen, mpamorona ny cryptocurrency Chia, lasa liana tamin'ny fitsapana an-habakabaka. Tsotra ny fotokevitra: rehefa foronina ao anaty rojo misy sakana ny sakana, dia miparitaka any amin'ny valan-tserasera. Rehefa mahita ny iray amin'ireo sakana ireo ny mpitrandraka iray dia avoakany amin'ny sisa amin'ny tambajotra.
Ny hafa kosa manome ny porofo tsara indrindra momba ny habaka, izany hoe ny tahiry azon'izy ireo omena amin'ny tambajotra. Ny telo tsara indrindra dia zaraina haingana amin'ny tamba-jotra, ary ny iray amin'ireo "mpizara fotoana" ao anatiny dia manamarina ny fotoana nanomezana ny fitsapana ary noho izany dia manamarina ny sakana vaovao.
Ny hevitra dia ny tsirairay dia manana toerana fitahirizana maimaimpoana izay azo ampiasaina hanamarinana ireo fifanakalozana ireo nefa tsy miteraka fandaniana fanampiny.
Raha tsorina Mba hahazoana mari-pamantarana Chia dia mila fitsapana an-habakabaka ianao. Arakaraka ny habetsaky ny toerana fitahirizanao no mahatsara ny fahafaha-manao andrana amin'ny habakabaka dia mihabe ny mari-pamantarana Chia azonao.
Raha ny marimarina kokoa, Chia dia blockchain blockchain ary sehatra fifanakalozana izay mikendry ny hanome ny tombony rehetra amin'ny cryptocurrency mahazatra: ny fanapariaham-pahefana, ny fahombiazany ary ny filaminana.
Saingy ny teboka fivarotana tsy manam-paharoa dia ny 'fambolena', mpisolo toerana ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay tsy tokony handoto ny tontolo iainana (amin'ny vola crypto, ny 'fambolena' dia misy ny fametrahana vola amina vola virtoaly ao anaty valan-tsolika ao amin'ny protokol DeFi, mba hahazoany tombony avy amin'ny valisoa. Ny mpampindram-bola dia valisoa amin'ny endrika famantarana,
Chia dia natomboka tamin'ny 2017, famoahana izay somary ambany ambany ihany amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Ny Chia Network dia natsangan'ny mpahay siansa amerikana Bram Cohen, izay namorona ny rafitry ny fizarana rakitra peer-to-peer BitTorrent ihany koa.
Tamin'ny 3 May 2021 dia nanambara ny fanombohana an'i Chiacoin izy (XCH), izay mampiasa fitehirizana amin'ny kapila mafy ataonao mba hividianana marika vaovao. Ny hany ilainao dia clusters 100 GB amin'ny singa antsoina hoe patch.
Eritrereto fa sakana amin'ny angon-drakitra misy habaka 100 GB, izay ahitana cluster ny tsirairay. Arakaraka ny habetsaky ny teti-dratsy anananao no lehibe kokoa ny mety hitomboan'ny Chiacoin.
Na dia noheverina hanararaotra ny habaka fitahirizam-bokotra tsy ampiasaina aza i Chia tamin'ny voalohany, dia tsy voafehy intsony ny raharaha satria mahazo ny toerana fitahirizana rehetra misy eny an-tsena ny mpitrandraka mba hanatsarana ny fahafahan'izy ireo mahazo mari-pamantarana sy ho an'io raharaha io.
Mampiasa kapila mafy ireo mpitrandraka hanokana habaka betsaka araka izay azo atao ho an'ny fitrandrahana crypto mora na lafo vidy na 'fambolena'. Na eo aza izany dia mino ireo mpandinika ara-bola fa na dia nisondrotra aza ny vidin'ny kapila mafy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy noho ny fitrandrahana token Chia ary hitohy ho avo kokoa noho ny mahazatra mandritra ny fotoana ho avy.
Vokatr'izany dia nisondrotra ny vidin'ny kapila mafy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, satria efa namidy ireo modely avo lenta.
Ny tsena dia miaina famatsian-kapila mafy, izay azo ampitahaina amin'ny toe-javatra tamin'ny 2012 rehefa nanakana ny famokarana kapila mafy ao amin'ny firenena ny tondra-drano any Thailand. Tamin'izany fotoana izany, ny vidin'ny kapila mafy dia nitombo teo amin'ny 22%, hoy ny mpandinika Deutsche Bank, Sidney Ho. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho avo dia avo ny vidiny.
Amin'ny lafiny famakafakana ny vidin'ny fiara dia voalaza fa ny vidin'ny kapila mafy antonony manana 6TB na 8TB dia tsy niova firy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. 10TB kapila mafy tsy nahazo lafo ihany koa. Mandritra izany fotoana izany, ny kapila mangirana 12TB, 14TB, 16TB, ary 18TB dia nanjary lafo kokoa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy (ny SKU sasany dia nahazo $ 100, ny hafa kosa nitombo avo roa heny).
Ny ankamaroan'ny kapila mafy 14TB ka hatramin'ny 18TB dia kapila akaiky, toy ny Seagate's Exos ary Western Digital's WD Gold ary Ultrastar. Ny ankamaroan'ireo singa ireo dia amidy mivantana amin'ireo orinasa toa ny Amazon Web Services, Google, ary Microsoft amin'ny vidiny voatondro ary noho izany dia tsy amidy antsinjarany mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny cryptocurrency Chia, mampiakatra ny vidin'ny kapila mafy